Ra’iisul wasaare Abiy Ahmed oo xilal muhiim ah u magacaabay xisbiyada mucaaradka dalka Itoobiya – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaRa’iisul wasaare Abiy Ahmed oo xilal muhiim ah u magacaabay xisbiyada mucaaradka dalka Itoobiya
Ra’iisul wasaare Abiy Ahmed oo xilal muhiim ah u magacaabay xisbiyada mucaaradka dalka Itoobiya
18/10/2018 B M Arimaha Bulshada, Wararka, Wararka Dibada, Wararka Soomaalia 0
Hiiraan Xog, Ra’isul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa wali ku mashquulsan in dalkiisa ka hirgaliyo isbedelo hor leh, waxa uuna Ra’isul Wasaaraha Heshiis la gaaray inta badan Jabhadihii hubeysanaa ee dowlada dagaalka kula jiray.
Dowlada Itoobiya ayaa hada bilowday in xilal muhiim ah u magacawdo qaar kamid ah jabhadihii hubeesnaa ee dagaalka kula jiray dowlada ,waxa ayna tilaabadan qeyb ka tahay heshiisyo horey dowlada ula gashay Jabahadihii hubeesnaa.
Xubno kamid ahaa jabhadda Oromada ee OLF iyo Ginbod 7 ayaa loo dhiibay laamaha ammaanka ee deegaannada Oromiya iyo Amxaarada, waxaa sidoo kale la filayaa in dowlada xilal kale u magacawdo xubno kale oo kamid ah ururadan.
Kamal Dalju oo kamid ahaa xubnaha OLF ayaa waxaa loo magacabay hogaanka nabadgalyada iyo cadaaladda ee gobolka Oromiya halka gudoomiye ku xigeenkii OLF Xayle baba ayaa isna loo magacaabay gudoomiyaha booliska ee gobolka Oromiya.
Taliyihii ciidanka Jabhada Ginbod 7 ayaa isna loo magacaabay taliyaha aminga ee dawlad deegaanka Axmaarada, waxaana magacaabista xubnahan mucaaradka kamid ahaa si weyn looga hadal hayaa gudaha Itoobiya.
Jabhada Soomaalida ee ONLF ayaa iyagu wali heshiis rasmi ah la galin dowlada, mana jiro ilaa hada wax xilal ah oo dowlada Itoobiya u magacwday xubno kamid ah kooxda ONLF oo qaarkood dib ugu laabteen gudaha Itoobiya.
AKHRISO:- Dowlada Soomaaliya oo ka hadashay duqeeyntii ka dhacday degmada Xarardheere
Daawo Sawiro:- Kooxda Banaadir oo ku guuleesatay koobki Janaraal Da’uud